नवराज बिकलाई जलाउन लग्दा, बाटो मै ढले आमा र बहिनीहरु, आखिर कहिले सम्म रुन पर्ने हो यो परिवारलाई? (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > अपराध > नवराज बिकलाई जलाउन लग्दा, बाटो मै ढले आमा र बहिनीहरु, आखिर कहिले सम्म रुन पर्ने हो यो परिवारलाई? (भिडियो)
admin May 28, 2020 अपराध, भिडियो, समाचार, समाज 0
केहि दिन अगाडि प्रेमिकालाई बेहुली बनाएर ल्याउन भनेर घरबाट साथीहरू सहित गएका नवराज बिककाे त्यहि दिन नै अन्तिम दिन नै हुन्छ भन्ने के थाहा? केटीले फोन गरेर मलाई लिन आउ नत्र मेरो बिहे अर्कैसँग गरिदिन लागे भनेर भनेपछि साथीहरू सहित गएका थिए । बेहुली लिन गएका नवराज लगायत १९ जनालाई उनिहरूले कुटपिट गर्दै लखेटेका थए ।
लखेट्ने क्रममा उनिहरू भेरी नदिमा हाम्फालेकाे भनिए पनि उनिहरूकाे शरिरमा चोटपटकहरू देखिइनु र जिवितहरूकाे बयान अनुसार उनिहरूले अर्घचेत हुन्जेल कुटेर नदिमा फालिदिएकाे जिकिर छ । गएका १९ जना मध्ये ६ जनाकाे शब भेरीमा फालिदिएकाे मध्ये अहिलेसम्म् ५ जनाको शब भेटिईसकेको र अझै एक जना बेपत्ता नै थिए ।
अन्तिम सँस्कारका लागि तैयार गर्दागर्दै यस्तो बेहाल अवस्थामा भेटिए परिवार तथा गाउँले सबै जना कि त्यो अवस्था हेर्दा कसैकाे मन बुझाउने ठाउँ नै छैन । यसरी रूकुममा भएकाे नरसँहारमा ज्यान गुमाउनेहरू मध्ये नवराज एक थिए । उनकै डेढ, दुई बर्ष अगाडिदेखिकाे मल्ल थरकि युवतीसँग प्रेममा परे । एकआपसमै प्रेममा परेका दुबै जनाले बिहेका लागि तैयारी गरिरहेका र अन्तिम रूप दिन युवतीले बोलाइएकाे जनाकारीमा आएकाे थियो ।
यतिबेला जाजरकोट रणभूमि बनेकाे छ । भेरीमा हराएका मध्ये ५ जना फेला परेका छन् । अन्तरजातिय विवाहका लागि गएका नवराज बिककाे यस्तो बिभत्स अवस्थामा भेटिएकाे लाश अन्तिम सत्गत गर्न लागिएकाे छ । उक्त सत्गतमा आएका कुनै पनि मानिसहरूकाे आँखा नरसाएकाे भन्ने देख्न सकिन्न ।
अन्तिम सँस्कारका लागि परिवारकाे यस्तो विचल्ली, यस्तो पीडा एकपटक हेरेपछि अवस्य केहि लेखेर शेयर गर्नुहाेला ।
सिन्धुपाल्चोकको नौ किलोमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा १५ जना भन्दा बढी यस्तो अवस्थामा!